Arsenal oo bedelka Danny Welbeck ka dhex aragta kooxda FC Porto – Gool FM
Arsenal oo bedelka Danny Welbeck ka dhex aragta kooxda FC Porto
(London) 08 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay soo qaadanayso weeraryahanka FC Porto ee Yacine Brahimi si ay bedel uga dhigto booska Danny Welbeck.
Welbeck ayaa beeca xorta ah ka noqon doona garoonka Emirates xagaaga kaddib shan sanadood oo uu kooxda Gunners la qaatay, isagoo welina aan saxiixin heshiis cusub.
Arsenal iyadoo raadinaysay ciyaaryahan ku habboon booska Welbeck ayaa haddana Warsidaha A Bola waxa uu warinayaa in macallin Unai Emery uu doonayo inuu keensado Brahimi.
Kooxda Arsenal ayaa la rumeysan yahay inay qarash-gareyn doonto suuqa xagaaga adduun dhan 40 milyan oo gini taasoo la micno ah in Brahimi uu noqon doono beeca xorta ah isla markaana uu la saxiixan karo macallin Emery si uu xilli ciyaareedkiisa labaad guul ugu qaato kooxda ka dhisan Waqooyiga London.
Dhaliyaha xulka qaranka Alegria ayaa dhaliyey todoba gool 20 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan horyaalka Primeira Liga, waxaana uu si toos ah uga qeyb qaatay 16 gool xilli ciyaareedkii la soo dhaafay markaasoo kooxdiisa Porto ay ku dhammaysatay halka ugu sarreysa horyaalka ama ay ku guuleysatay.
Kooxaha AC Milan iyo Watford ayaa sidoo kale ugaarsi ugu jira xiddigan 28-sano jirka ah marka uu dhaco heshiiskiisa bisha June ee soo aaddan.
Waa sidee rikoorka Romelu Lukaku ee kulamada uu wajahay Kooxda Fulham ka hor kulanka berri ee Premier League?
Waa sidee rikoorka Mohamed Salah ee kulamada uu wajahay Kooxda Bournemouth ka hor kulanka berri ee Premier League?